Fetin’ny fahaleovantena : « Podium » sy Matso lehibe etsy Mahamasina -
AccueilRaharaham-pirenenaFetin’ny fahaleovantena : « Podium » sy Matso lehibe etsy Mahamasina
Ho lavalava ny faran’ny herinandro ao anatin’ny fanamarihana ny fetin’ny fahaleovantena. Toy ny isan-taona, toerana maromaro eto an-drenivohitra sy any amin’ny faritra no mandray ny fety aman-danonana na ny « Podium ». Ny alatsinainy 26 jona izao etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny faradoboka amin’izany, aorian’ny matso. Ireo mpanakanto sangany sy ankafizin’ny maro amin’izao fotoana no hifarimbona hitondra ny anjara birikiny. Hiara-dia amin’io seho goavana etsy Mahamasina io i Marion, Melky, Tsiliva ary Nina’s.
Ho an’ny anio, hitohy eny Sabotsy Namehana ny fampisehoana Vakodrazana hiarahana amin’ny tarika Voninavoko izay arahin’ireo mpitsoka mozikan’ny zandarimariam-pirenena. Hampiantrano ny Podium ihany koa ny tanànan’ Ivato manomboka amin’ny 1 ora ka hanafana izany ny Mem’s Académy, Jarifa, ny tarika Green ary ny tarika Ambondrona. Karazana gadona maro ihany koa no hanafana ny sehatra etsy amin’ny kianjan’ ny Maki Andohatapenaka miainga amin’ny gadona rap hiarahana amin-dry Da-Hopp ka hatramin’ireo mozika mafana hoentin-dry Miary Vibration, Jean-Aimé, Onja ary Dah Mama.
Toerana telo kosa ny alahady ho avy izao no handray ny « Podium » izay samy manomboka amin’ny 1 ora antoandro avokoa. Hifarimbona hanafana ny sehatra eny Sabotsy Namehana ry Tence Mena, Kiaka, Samoëla, Ndondolah ary Randrianasolo Raymond. Ny tarika Ny Ainga, Mage 4, Oladad, Maroloko, tarika Miandry ary Raozin’i Gasikara kosa no eny Anosizato.
Mpanakanto maro mivoy karazana gadona samihafa kosa no hanafana ny etsy anoloan’ny lapan’ny tanàna ary toy izany koa ireo mpanakanto avy amin’ny foko 18.
Mampiavaka hatrany ny fetim-pirenena ny afomanga izay atao eny amin’ny farihin’Anosy.